56 su'aalo farsamo iyo jawaabaha dab-dhaliye naaftada -maya. 20
16. Sidee loo xisaabiyaa hadda ee koronto-dhaliye saddex waji ah? Jawaab: I = P / (√3 Ucos φ) taas oo ah, hadda = awood (watts) / (√3 * 400 (volt) * 0.8). Qaaciddada la fududeeyay waa: I (A) = halbeeg lagu qiimeeyay awoodda (KW) * 1.8 17. Waa maxay xidhiidhka ka dhexeeya awoodda muuqata, awoodda firfircoon, awoodda la qiimeeyay, ugu badnaan...
56 su'aalo farsamo iyo jawaabaha dab-dhaliye naaftada -maya. 5
1. Waa maxay shuruudaha isticmaalka isku midka ah ee laba qalab-dhaliye? Qalab noocee ah ayaa loo isticmaalaa si loo dhamaystiro shaqada barbar socota? Jawaab: Shardiga isbarbar yaalka ayaa ah in tamarta degdega ah, inta jeer ee labada mishiin ay isku mid yihiin. Caadi ahaan loo yaqaan "saddex simultaneousR...
Habka isticmaalka shidaalka ee qalabka dhaliya naaftada
Guud ahaan, isticmaalka shidaalka matoorayaasha naaftada waxaa lagu xisaabiyaa 0.2-0.25kg/kW.saacaddii, hal litir oo naafto ah waa qiyaastii 0.84-0.86 kg. Dabadeed 1KW saacaddii waa 0.2-0.25kg oo loo qaybiyo 0.84 = 0.238 litir-0.3 litir, laguna dhufto kiilowaat oo la mid ah isticmaalka shidaalka saacaddii. Taasi waa, 0...
Ganacsiga shisheeye ee makaanikada iyo korantada ee Shiinaha ayaa sii waday inuu koro bishii Maarso, mugga dhoofinta alaabada makaanikada iyo korantada ee Shiinaha ayaa kordhay 43% xilli ciyaareedkii ugu horreeyay.
Iyada oo ay saameeyeen arrimo ay ka mid yihiin saldhigga hooseeya ee sannadkii hore, soo kabashada baahida dibadda, iyo faa'iidooyinka saadka ee waddankayga, ganacsiga dibadda ee farsamada iyo korontada ee waddankaygu wuxuu sii waday inuu kordho March. Marka loo eego tirakoobyada maamulka guud ee Kastamka, wadarta guud ee im...
ogaanshaha iyo daawaynta qaylada aan caadiga ahayn ee marawaxada naaftada dhaliya
Marka qalabka naaftada dhaliya uu shaqeeyo, maadaama marawaxadu ay muddo dheer isticmaalaysay, mararka qaarkood waxa ay si lama filaan ah u samaynaysaa buuq badan, gaar ahaan marka uu xawaraha naaftada naaftada ahi kor u kaco, qaylada ayaa sidaas u kordheysa. Dhacdada noocaan ah waxaa loo yaqaan taageere Codka caleemaha aan caadiga ahayn. ⑴ Dib u...
Koronto dhaliyaha naaftada dhigay suunka marawaxada siibanaysa
Inta lagu jiro hawlgalka dab-dhaliye naaftada, marmar-soo noqnoqda sare, fiiqan, iyo dhawaaq "qaq-" joogto ah ayaa la sameeyaa. Marka shidaalka la degdegayo, dhawaaqa ayaa aad u muuqda, kaas oo ay sababto silbashada jiidka. ⑴ Sababta ①Xirigga suunka ee marawaxada ama matoorka hawadu waa ay ku filnaatay...
Dayactirka maalinlaha ah iyo taxadarka matoorayaasha naaftada
1. Hawo-mareenka saliidda ◆Dabci qulqulka dhiigga ee dhuumaha shidaalka ee cadaadiska hooseeya, oo si isdaba joog ah u riix badhanka bamka xawilaadda shidaalka ilaa aanay jirin xumbo hawo ah oo ku qulqulaya dhuumaha saliidda ee cadaadiska hooseeya, ka dibna adkee dhiigga bool ◆Dabci isku dhafka tuubada shidaalka cadaadiska sare leh oo bilow...
Sababaha keenaya shidaalka aan sinnayn ee qalabka dhaliyaha
1. Saliid aan sinnayn oo ay keento cillad farsamo: Ka dib isticmaalka muddada dheer, dabacsanaan ama nusqaamo aad u weyn oo ku yimaadda isku xirka wadista bamka duritaanka shidaalka, qalabka wadista waa xiran yahay oo dib-u-celinta ayaa kordheysa, taas oo sidoo kale saameyn doonta isku mid ahaanshaha sahayda saliidda dhululubo kasta. Ka sokow, daadinta...
Habka hubinta iyo hagaajinta shidaalka aan sinnayn ee dhaliyaha naaftada
Haddii sahayda shidaalka dhululubo kasta oo naaftada naaftada ka mid ah ay tahay mid aan sinnayn (tusaale ahaan, sahayda shidaalka qaar ka mid ah dhululubada waa mid aad u weyn, iyo sahayda shidaalka qaar ka mid ah dhululubada ay aad u yar), waxay si toos ah u saameyn doontaa xasiloonida matoor naaftada. Bamka duritaanka shidaalka waa laga saari karaa si loo eego...
Ciribtirka Sawaxanka Dhaliyaha Naaftada
Xakamaynta qaylada ayaa noqonaysa mid aad muhiim u ah rakibaadda inta badan qalabka wax dhaliya. Waxaa jira dhowr habab oo laga dooran karo si loo xakameeyo heerka buuqa. 1. Muffler qiiqa qiiqa: Mashiinka qiiqa qiiqa wuxuu yarayn doonaa heerka dhawaaqa matoorka naaftada. Darajooyinka kala duwan ee aamusayaasha waxay leeyihiin aamusnaan kala duwan...